Eggs and Sprite အားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ | My Diary
← Zomi National Day
Celebration of ‘Chin National Day’ Banned in Chin State →
ကြက်ဥ နဲ့ Sprite ရောသောက်ရင် အားဖြ့ည်တယ်ဆိုလို့ နေ့တိုင်းလို သောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါသလဲ။
နာမယ် အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိတယ်။ Soda, Soda pop, Pop, Carbonated beverage, Tonic, Coke, Fizzy drink, Mineral စသဖြင့်။ သမိုင်း ရှာရင် အာရပ်ကမ္ဘာက စခဲ့တယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ၁၇ ရာစုကစပြီး ဈေးကွက်ထဲ ၀င်လာခဲ့တယ်။ ၁၈ ရာစုကြမှ Carbonated drinks ဆိုတာ ပေါ်လာတယ်။ Phosphate soda (ဆိုဒါ) က ၁၉၀၀ နောက်ကြမှ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်လာတယ်။
ဘယ်အရာမဆို တာရှည်ခံ၊ နံမယ်ရ၊ ခေတ်လဲ နောက်မကျ၊ စီးပွါးရေးကလဲ တွက်ခြေကိုက်၊ မြင်လိုက်တာနဲ့ ၀ယ်ချင်၊ အောင်မြင်တဲ့ လူသုံး-ပစ္စည်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ တံဆိပ်အတူ၊ အရည်အသွေးတူ၊ လူတွေ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမဆို ၀ယ်ယူနိုင်ကြတာက (ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း) ဖြစ်စဉ် တစိတ်တပိုင်းပါဘဲ။ ကနေ့ခေတ် လူတွေကြား ပေါ်ပြူလာ အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဖျော်ရည်ဟာ ၁၉၂၀ ကတည်းက ပေါ်ခဲ့တဲ့7Up (ဆဲဗင်း-အပ်) ဖြစ်မယ်။ Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda လို့ စခေါ်ခဲ့တယ်။ Mood-stabilizing drug စိတ်အခြေအနေ ထိန်းဆေးသဘောပါ။ Hangover cure အရက်-များသွားလို့ ဖြစ်တာတွေ ကုစားဘို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။
Sprite ဆိုတာက Lemon-lime flavored သံပုရာ-ရှောက်အနံ့ထည့်ထားတဲ့ Caffeine (ကေဖင်း) မပါတဲ့ Soft drink ဖြစ်တယ်။ နာမယ်ကြီး Coca-Cola Company ကနေ ၁၉၆၁ ကတည်းက7Up ကို ပြိုင်ထုတ်တာလဲ ဖြစ်တယ်။ ထုတ်ခါစမှာ Whiskey (၀ီစကီ) တို့ Vodka (ဗော့ဒဂါ) တို့နဲ့ ရောသောက်ဘို့ပါ။ အမေရိကားမှာ လူအများ အသဲစွဲ ဘတ်စကက် NBA ကို ၁၉၉၀ မှာ Sponsor ရကတည်းက Sprite နာမယ် ပိုကြီးကြီးလာခဲ့တယ်။ Naturally Tart ဖြစ်ပါတယ်လို့ ကြော်ညာပါတယ်။ Tart ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က နှစ်ခွ-သုံးခွ ရှိတယ်။ ချဉ်စုတ်စုတ်-အရသာ၊ ဌာပနာ-သွားရည်စာနဲ့ ကြေးစား-မိန်းမတွေ ဖြစ်တယ်။ တချို့ကလဲ ဒါမျိုးမှ ကြိုက်တာကိုး။
၁၉၉၈ မှာ Center for Science in the Public Interest ကနေ Liquid Candy: How Soft Drinks are Harming Americans’ Health အစီရင်ခံစာတခု ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အချိုရည်တွေကြောင့် Obesity အ၀လွန်တာ၊ Type2Diabetes ဆီးချိုရောဂါ၊ Dental cavities သွားပိုးစားတာ၊ Heart disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ အာဟာရ နည်းတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ၁၉၉၇-၂၀၀၁ အတွင်း အမေရိကားမှာ အချိုရည် သောက်တာရော အ၀လွန်တာပါ နှစ်ဆတိုးခဲ့တယ်။
USDA အမေရိကန် အစားအသောက်အဖွဲ့ကနေ သတ်မှတ်ပေးထားတာက တနေ့မှာ (ကယ်လိုရီ) ၂၀၀၀ ရမဲ့ အစား အစာထဲမှာ သကြား လဘက်ရည်ဇွန်း ၁၀ ဇွန်းထက် မပိုရပါ။ ဖျော်ရည် အတော်များများထဲမှာ သကြား ဒိထက် ကဲပါနေတယ်။ Caloric intake များရင် လူကိုဝစေတယ်။ လျော့ချင်ရင် လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်မနေ လုပ်ရလိမ့်မယ်။
အရင်က ဖျော်ရည်တွေထဲက အချိုဓါတ်ဟာ Corn syrup ကနေရတယ်။ ၂၀၁၀ ကစပြီး အမေရိကားမှာ High-fructose corn syrup (HFCS) ကို ပြောင်းသုံးစေတယ်။ ဈေးချိုလို့ပါ။ HFCS ကို ဆီးချို၊ သွေးတိုး စတာတွေ အားပေတယ်လို့ ထောက်ပြကြတယ်။ ဥရောပမှာတော့ သူများတိုင်းပြည်တွေကနေ Sugarcane ကြံ-သကြား မသွင်းရအောင် ဥရောပထွက် Sugar beets ကိုသာ သုံးစေလို့ Sucrose ကနေ အချိုဓါတ်ရစေတယ်။
Carbonated water ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါ ရေကြောင့် သွားကိုတော့ သိပ်မထိခိုက်စေပါ။ သူ့ထဲမှာပါတဲ့ (ဖေါ့စဖိတ်) ကြောင့် အရိုးကို ထိခိုက်စေမှာလဲ မပြောပလောက်ပါ။ European Journal of Gastroenterology and Hepatology ကနေပြောတာက အစာမကျေဖြစ်တာ သက်သာစေတယ်၊ ၀မ်းမချုပ်စေဘူးတဲ့။
Posted on February 24, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged health. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.